ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: Happy Belated Birthday to Demo !!! Happy Birthday Ma Gyit and Ma Nya Lay!!!
Happy Belated Birthday to Demo !!! Happy Birthday Ma Gyit and Ma Nya Lay!!!
ပန်းမကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးက ရှားပါးစာရင်းဝင်ဆိုတော့ အမ နဲ့ ညီမတို့ ပန်းကြိုက်လောက်ပါတယ် ဆိုပြီး မွေးနေ့လက်ဆောင် ပန်းစည်းလေးတွေ တင်လိုက်ပါတယ်။ ပန်းသတင်း လေညင်းဆောင် သလို လူသတင်းနဲ့ ဘလော့သတင်း လဲ ပန်းလို လန်းလို့ သတင်းမွှေးပါစေ။
(တစ်ယောက် တစ်စည်းစီ ဝေယူကြနော် ) :)
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 9:07 AM